Amaqiniso Okudabukisayo Wenjabulo | Martech Zone
Amaqiniso Okudabukisayo Wenjabulo
NgoLwesine, ngo-Okthoba 26, 2006 NgoMsombuluko, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Ngikholwa ukuthi ngiphethe injabulo yami uqobo. Kunamathonya amaningi angaphandle (imali, umsebenzi, umndeni, uNkulunkulu, njll.) Kepha ekugcineni, yimina onquma ukuthi ngijabule noma cha.
Namuhla ekuseni, ngibuke lezi zindaba futhi zifakwe kuMadonna ku-Oprah echaza ngokutholwa kwakhe kwengane evela e-Afrika. Okungihlabe umxhwele kakhulu yisitatimende sabantu abaningi sokuthi lokhu bekuyinto enhle okumele yenziwe nguMadonna ezoletha injabulo enganeni.
Ngike ngakhala ngalokhu ngaphambili kusayithi lami, kepha lokhu kumane kuyinhlekisa. Kungani umphakathi wethu uhlala uxuba ubuhlakani, ithalente nenjabulo nengcebo? Ngakho-ke uMadonna uzokwenza umama ongcono ngoba ucebile? Mhlawumbe ikhaya lezintandane umfana ayekulo lalinabantu abathandekayo ababemthanda futhi bemkhathalela. Akungabazeki, kodwa ngiyaqiniseka impela ukuthi uzoba nomnakekeli ngaphansi kukaMadonna. Ngakho-ke, yini umehluko?
Imali izoyithokozisa lengane? Uqinisekile? Wake wazibona ezinye zezimpilo zezingane zezinkanyezi zerock noma zabantu abacebe kakhulu? Abaningi babo bangena futhi baphuma ekuvuseleleni futhi balwela impilo yabo yonke ukuzakhela igama. Ingcebo iletha isethi entsha yezinkinga empilweni (izinkinga engingathanda ukuba nazo, noma kunjalo). Futhi, ungafuna yini ukuba noMadonna njengoMama? Bengingeke! Angikhathali ukuthi unamalini… ngimbone eningi kakhulu uMadonna empilweni yami ukumhlonipha ngempela.
Mhlawumbe lokhu bekukhuluma kakhulu ngenjabulo kaMadonna kunengane. Kuyishwa, kepha ngicabanga ukuthi kunjalo. Angikholwa ukuthi ingane esuswe esikweni lakhe, ezweni lakubo, umndeni wakhe uyithuba lokujabula nge-Rock Star ebeka i-jet njengoMama.
Umfana wayesekhaya lezintandane ngoba uyise wayengasenayo imali yokumnakekela. Asikwazi ukuqagela ngamanye amasiko nemikhuba yawo yokuba ngumzali. Abantu abaningi baseMelika bangashaqeka kwamanye amasiko nokuthi izingane zinakekelwa kanjani noma ziphathwa kanjani. Mhlawumbe lo mlisa wayeyithanda kakhulu indodana yakhe waze wanikela ngengane yakhe kothile owayengayondla. Lokho kungathatha inani elingakholakali lothando.
Kuthiwani uma, kunokuba athengele ingane, uMadonna umane wasungula utshalomali lwesikhathi eside olwenza ukuthi kube nemfundo engcono, izinsizakusebenza nemboni esifundeni asivakashele? Kungenzeka abe nomthelela enjabulweni yabantu abaningi. Mhlawumbe ingane ayitholile yayiyojabula ngaleyo ndlela.
I-API… Ngubani owakha i-APUI?
Okthoba 27, 2006 ngo-6: 29 AM
UNkulunkulu wenza ukuthi zonke izinto zisebenzele labo abathanda uNkulunkulu futhi ababizelwe injongo yakhe… banokholo!
Okthoba 30, 2006 ngo-6: 15 AM
Hlola http://gather.com/ - Ingosi yokuxhumana nabantu ye-NPR isebenza njengamanje: